Lahla Of Hemorrhoids Benu Le Indlela Great! | Cures Hemorrhoid
Hemorrhoids i imeko eqhelekileyo kakhulu, ingakumbi ukuba ngaba ukhulelwe okanye nje babelekile. Naluphi na uhlobo yokwanda yengcinezelo ngemithambo isikali kungabangela hemorrhoid. Le yingxaki aku- eqhelekileyo, enqabile kodwa kuxoxwe. Ngokufunda eli nqaku, uya kuba nakho ukuqonda ngokuzeleyo oonobangela kunye neendlela zonyango.
Ukugcina kwisisu efakwa simahla ubumdaka kubalulekile ukuba une hemorrhoids. Sebenzisa usula emanzi ukucoca kunokuba iphepha toilet. A sitz bath kubushushu dikidiki kuya kunceda ekunciphiseni ukudumba kunye kwinwebu hemorrhoids. Zama ukuba ingene kuma 20 imizuzu.
Ukuba zokuhlangabezana nale yokubandezeleka of hemorrhoids, musa ukuba ukhathazekile ngenxa yokuba kukho isiqabu phandle phaya kuwe. Kucetyiswa ukuba usebenzise sitz bath amaxesha ambalwa ngosuku ngalunye, ngokuba malunga 10 imizuzu okanye ukuze lonke ixesha. Zama ukusebenzisa Oluma abandayo ukufumana isiqabu.
Ukuba une hemorrhoids, zama ukuthatha Rutin. Oku kunokwenzeka ukuba imithambo yegazi thathaka kungabangela hemorrhoids. Rutin ayikho kuphela mfuneko ukufunxa Vitamin C, kodwa kusinceda siqinise imithambo yegazi. Ukutya kakhulu ukuba edliwayo rutin are imifino eluhlaza, anyanisi, kunye neziqhamo sohlobo. Esithathwa oluqhelekilyo izongezo phezu-the-counter yi 500 milligrams, zithatyathwe kanye ngosuku.
Ingaba uyazi kukho izinto ezininzi ekhishini lakho ukuba lo kunokunciphisa iimpawu hemorrhoids? An ice pack, enye, kuyinto isisombululo lula. Le silwa nga kunceda ukunciphisa intlungu hemorrhoid. Xa ufaka Imiqulu iqhwa hemorrhoids yakho, kuya kunciphisa ukudumba.
Ukuze uncede ne hemorrhoids zakho, unga zama ukutya iimveliso ingqolowa ngakumbi lonke. Kusenokwenzeka kwakhona ukunciphisa ububomvu kunye ukuluma. Enoba ukuba ukutya ipleyiti enkulu ungumcu okanye iqebengwana ngwenya, sakhetha ingqolowa lonke ukhetho smart.
Amaninzi amaxesha ehleli phezu komqamelo eziphathwayo mibuthoinganceda intlungu lu dityanisiwe hemorrhoids. Usenokuba uvakalelwa nzima ukuyisebenzisa ngexesha emsebenzini, kodwa xa ekhaya okanye ekhwele nje emotweni, le ndlela uyakwazi ukunceda ukunciphisa kakhulu intlungu uzive, nto leyo eza kwenza kube lula kakhulu ubomi bakho kuwe.
Zama amayeza home hemorrhoids zakho phambi nokuchitha imali kunyango eninzi kunye namayeza. Ukuvumela wena ukuba zigcine emanzini sitz inika isiqabu. Nciphisa ixesha yakho ebhafini ku malunga 15 imizuzu, uze uphinde emva intshukumo nganye kwamathumbu. Nangona hemorrhoids kunokuba silume ngokwenene ngamaxesha, ukuba ngeke adlale nabo, oku kubi. Ungazama ngobunono abethe ezithile igqwirha amangile kwi kummandla ochaphazelekayo ixeshana isiqabu. Yitya okudla ne ifayibha, kwaye uqinisekise ukuba usela iikomityi ubuncinane ezisibhozo zamanzi ngosuku ngalunye. Oku ndiya kukugcina, ndikusindise abahluza kakhulu nzima ekubeni intshukumo kwamathumbu.
Ukuphakamisa izinto ezisindayo inokuba negalelo kuphuhliso hemorrhoids. Naluphi na uhlobo wena beka emzimbeni wakho kuba ngokwenjenjalo ke, izabalazela ukuhambisa ezibilini zakho. Ukuba uphethwe hemorrhoids lonke ixesha kufuneka ukhangele indlela angasondeli uyaziphakamisa into enzima.
Zama ukwehlisa umzimba ukuba balahle iintlungu hemorrhoid! abantu amavila badla ukufumana hemorrhoids. Uxinzelelo into kwi isisu sakho ukusuka ubunzima kwemfuneko kunye nenkunkuma nga umfutho kwi emithanjeni yakho ezimpundu. Ungafuna ukuzama ukunciphisa umzimba, ukuze badle ukudla okunamafutha ifayibha ukuze ukwazi ukuthatha ezinye kolu xinzelelo emzimbeni wakho. Nangona kubonakala ngathi indlela elula umzimba okanye unyango hemorrhoid, ndiyazibamba ukusebenzisa ngokugqithiseleyo laxatives.
Zombini ukukhulelwa nokuzala kunokubangela kwaye mandundu iintlungu hemorrhoid kunye ukudumba. Unobangela kukuba uxinzelelo olongezelelweyo ibekwe kwindawo efakwa. Noko ozifunde kweli nqaku, ungaya malunga ukwakha iindlela ukuphepha umnyanzele ilindle lakho ize iphephe ukufumana okanye ukhulula iintlungu hemorrhoid zizonke.
tags: ivazi yegazi, movement wamathumbu, ubuhlungu hemorrhoid, sitz bath
« Sinale Hemorrhoids? Zama Tips yethu Ngokuba Relief!